Soo koobista dhacdooyinka xidigiska sanadka 2018 | Saadaasha Shabakadda
Soo koobid dhacdooyinka xidigiska sanadka 2018
Sanadka 2018 wuxuu bilowday usbuuc iyo laba maalmood kahor wuuna ku raran yahay dhacdooyinka xiddigiska ee kala duwan in aadan seegi karin Laga soo bilaabo daadashada xiddigaha illaa madoobaadka.
Ma rabtaa inaad ogaato dhacdooyinka ina sugaya sanadka oo dhan?
1 Dhacdooyinka dayaxa la xiriira
2 Dhacdooyinka la xiriira Qorraxda
3 Dhacdooyinka Starfall
3.1 Dhimashada daadashada daciifka ah
3.2 Xiddigaha Dhimanaya ee Adag
Dhacdooyinka dayaxa la xiriira
Barta ugu dhow Dayaxa ilaa Dhulka waxaa loo yaqaan perigee. Bishii la soo dhaafay ee Janaayo 2, dayaxu wuxuu ku sugnaa Perigee. Marka la fiiriyo halka uu dayaxu joogo, waxaan awoodi doonaa inaan ku raaxeysano dayax kale oo buuxa bisha gudaheeda Janaayo 31. Dhacdadan aan inta badan dhicin waxaa loo yaqaan Dayax Buluug, inkasta oo midabka aan la fiirsan. Intaas waxaa sii dheer, wadarta dayax madoobaadka ayaa dhici doona, laakiin kama muuqan doono Spain. Haddii aad rabto inaad aragto dhacdadan waa inaad u safarto Waqooyiga Ameerika iyo Australia.
Kuwa kale wadarta dayax madoobaadka waxaa lagu raaxeysan karaa Luulyo 27 waxayna noqon doontaa mid ka cajaa’ib badan tii hore, maadaama Dayaxa lagu arki karo midab casaan ah. Dayax-madoobaadkan waxaa laga arki karaa Spain, aagga ugu wanaagsanna wuxuu noqon doonaa Jasiiradaha Balearic, isagoo leh ugu badnaan madoobaadka markay tahay 22:21 (waqtiga jiilaalka).
Dhacdooyinka la xiriira Qorraxda
Bishii Janaayo 3, Dhulka waxaa la dhigay barta ugu dhow marka loo eego Qorraxda, iyadoo la dhigayo kaliya 147 milyan kiiloomitir.
15-ka Febraayo, qeyb qorrax madoobaad ah ayaa dhici doonta, in kastoo aan laga arki doonin Spain. Waxaa kaliya laga arki doonaa Antarctica iyo Koonfurta Ameerika.
6da Luulyo, Dhulku wuxuu ku yaalyaa barta ugu fog Cadceedda 152 milyan kiiloomitir.
Qorrax madoobaad kale oo qayb ah ayaa loo qorsheeyay July 13, laakiin laguma arki doono Spain sidoo kale, kaliya Antarctica iyo koonfurta Australia.
Agoosto 11 waxaa jiri doona qorax madoobaad qeyb ka mid ah oo laga arki karo Greenland iyo waqooyiga darafka ee Kanada, Yurub iyo waqooyiga Aasiya.
Dhacdooyinka qubeyska meteor-ka waxaa loo kala saaray labo: kan ugu daciifsan iyo kan ugu xoogan. Aynu marka hore eegno isku duba ridka dhacdooyinka xiddigta jilicsan iyo taariikhda ay dhici doonaan.
Dhimashada daadashada daciifka ah
taurids iyo leonids
Bisha Febraayo waxaan lahaan doonnaa labo dhacdo oo yar yar oo meteor ah oo loo yaqaan alpha-centáurides iyo delta-leonids. Midka hore wuxuu dhici doonaa 8 Febraayo kan labaadna 24.
Bishii Maarso waxaan ku raaxeysan karnaa laba roob oo kale oo yaryar oo la yiraahdo Gamma-Normids iyo Virginids. Waxay dhici doonaan 13 iyo 25, siday u kala horreeyaan.
Bisha Abriil waxaan awoodi doonnaa inaan cirka ka aragno maydhashada meteor ee aadka loo yaqaan heesaha iyo pi-puffy, dhacaya 22 iyo 24 Abriil.
20-ka Maajo waad arki kartaa Sagittarids. Kuwani waa meteors daciif ah.
27-kii Juun xiddigihii toogashada ayaa wacay bootidas, isagoo waliba waxyar la yaqaan.
Luulyo waxay noqon doontaa bil ay dhacdooyin badan oo xidigo toogasho ah ka dhici doonaan, in kasta oo aysan u habboonayn sidii Perseids-kii bishii Agoosto. Waxaan ku bilaabaynaa bisha Pegasids 10-ka Luulyo, waxaan sii wadaynaa Foosiyayaal 13-ka Luulyo, waan sii wadaynaa Pisces Austrinid iyo koonfurta delta-aquarids Luulyo 28 iyo, si loo dhammeeyo bisha, alfa-capricorns 30-kii.
Bisha Ogos waxaan sidoo kale yeelan doonnaa dhacdooyin kale oo daciif ah oo meteor-ka loo yaqaan koonfurta iota-aquarids (Agoosto 4th), waqooyiga delta-aquarids (Agoosto 8th), kappa-cgnids (Agoosto 18) iyo waqooyiga iota-aquarids (20-kii Ogast).
Bisha Sebtember waxaynu heli doonaa dhawr maydhasho oo ah xiddigo jilicsan oo daadanaya oo ku faafa bisha oo dhan. On Sebtember 1 waxaan yeelan doonaa alfa-aurigid, 9 delta-aurigid iyo piscid 20.
Oktoobar sidoo kale waxay leedahay xoogaa daciif ah meteor mayrooyin loo yaqaan qallafsanaanta (Oktoobar 8), lace epsilon-geminids (Oktoobar 18) iyo orionids (Oktoobar 21).
Nofeembar waxay leedahay afar qubeys oo daciif ah oo xiddigo ah oo ku faafa bisha oo dhan. Waxay ku caan baxeen koonfurta taurids, tauridska woqooyi, leonids iyo alpha-monocerotids. Waxay dhici doonaan maalmaha 5, 12, 17 iyo 21, siday u kala horreeyaan.
In la xidho sanadka bisha Diseembar, ayaa chi-orionids (Diseembar 2), Foosiyayaal (Diseembar 6), puppy-yada / vélidas (Diseembar 7), monocerotids (Diisambar 9), sigma-hydrids (Diseembar 12), iyaga cun aubergines (Diisambar 20) iyo ursids (Diseembar 22-keedii). Roobabkan waxaa laga yaabaa inaysan sidaa u muuqan, maaddaama bisha Diseembar ay jirto daruuro badan.
Xiddigaha Dhimanaya ee Adag
Seddex Roob oo Meteor-ka ugu caansan ayaa dhici doona sanadka oo dhan. Dhacdooyinkaani waxaa laga yaabaa inay noqdaan kuwo la xoojiyay oo ay yaqaanaan taageerayaal badan oo cirku (iyo kuwa aan ahayn). Dhacdooyinkani waa:
Biyaha eta. Waxaa lagu yaqaan inay ku xiran yihiin Halyeeygii caanka ahaa ee Halley. Waa maydhabo meteor ah oo leh hawl 60 mitir saacadiiba waxaana la daawan karaa May 6.
Bisha Agoosto way dhici doontaa adkeysiga caanka ah ama ilmada San Lorenzo. Waxay yihiin qubeys ilaa 100 meteor saacadiiba waxayna heystaan ​​ugu badnaan Agoosto 13.
Bishii Diseembar roobka ugu xiisaha badan ee xiddigaha toogashada sanadka ayaa dhici doona, Geminids-ka. Ugu badnaantiisu waxay dhici doontaa Diseembar 14 waxqabadkuna wuu imaan doonaa illaa 120 meteors saacaddii.
Macluumaadkan, cudur daar uma lihid inaad ka maqnaato dhammaan dhacdooyinka xiddigiska ee dhici doona sannadkan oo dhan. Iyaga ku raaxee!
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Soo koobid dhacdooyinka xidigiska sanadka 2018
Gorgorrada cagaaran ee Australia waxay khatar gelinayaan isbedelka cimilada